တရားမ ၀ င်ဖြစ်သင့်သော LOVE ISLAND မှအာဒံ၏ပူပြင်းသည့်ဓာတ်ပုံ ၂၀ - သတင်း
Love Island မှအာဒံ၏ဤဓာတ်ပုံ ၂၀ သည်အလွန်ပူပြင်းပြီး၊ ကိုးနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ပါ
၂၁ ရာစုအတွင်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီအာဒံရဲ့ဒီဓာတ်ပုံ ၂၀ ဟာအရမ်းကိုပူပြင်းနေပြီးဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့အပူချိန်ကိုဒီဂရီ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြှင့်တင်ရန်တစ် ဦး တည်းတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။
သေချာသည်မှာအာဒံအတွက်သူ၏အလွန်ထုထည်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထွင်းထားသောမေးရိုးမျှသာမဟုတ်ပါ။ သူ၌သူ၏မှေးမှိန်သောအညိုရောင်မျက်လုံးများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောပုံသွင်းထားသောမျက်ခုံးများနှင့်ဆံပင်များထက်သူ့အတွက်များစွာရှိသည်။ ငါကအာဒံအတွက်ရယ်စရာကောင်းတဲ့ရင်ဘတ်ထက်ပိုပြီးရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ် ဒါပေမယ့်ငါပြောနေတာကတော့ဒီ Instagram ရုပ်ပုံတွေဟာနောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင် wow ပါ။ သူတို့ကအရမ်းပူတယ်၊ မိဘတွေရဲ့လက်မှတ်ကိုသင်ကြည့်ချင်တယ်။
ဒီဓာတ်ပုံတွေကလူသားတွေကိုထာဝရဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့မင်းပြောနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအီးယူ ၉ နိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဖြစ်နေပြီ။ ဗြိတိန်ကသူတို့ကိုတားမြစ်ဖို့နောက်တစ်ခါဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့သူတို့ထာဝရပျောက်မသွားခင်အခုကြည့်ချင်နေလိမ့်မယ်။
မနေ့ကမွေးနေ့သတင်းများအားလုံးကိုလူတိုင်းကိုကြွေးကြော်ပါ။ the ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားမိပေမယ့်အခုအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါကြောင့်ယခုမှ စ၍ Amazon Kindle Books နှင့် Next Gift Vouchers ကိုကျွန်ုပ်စတင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးပြီ
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:42 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 27, 2017 ရက်တွင် (@adamcollard)
JW မတိုင်မီတနင်္လာနေ့ညဆော့စ်လေးသည်ကြီးမားသောအချိန်ရသော်လည်း ပို၍ ကြီးမားသောအချိန်ရှိခဲ့သည်
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 1:36 pm တွင် PDT မှာမေလ 14, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 5:12 pm တွင် PDT မှာမေလ 13, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
ABS ကိုမမေ့ပါနဲ့ ယခုငါ Burpees & handstands လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ့်မြေဖြူတွေသုံးပြီးရှုပ်ထွေးကိုယ့်အဖြစ် Tan & ဆံပင်အဆင့်ဆင့်ပြန်လည်လိုအပ်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 3:57 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 22, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:43 pm တွင် PDT မှာဇွန် 1, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
နောက်ဆုံးတော့ဘီယာကကျွန်တော့် ABS ကိုရောက်သွားတယ်။ ? ဒုတိယအကြိမ်သာကျွန်တော်လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးအားကစားခန်းမမှာလုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ကျွန်းပတ်ပတ်လည်မှာစက်ဘီးစီးပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။5× 8-10 Deads5× 10/10 Split Squats4× 15 ထိုင်ခုံတန်း4× 8/8 DB Floor Z-Press ဖြင့်အမြန်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့သည်ပြီးမြောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့တက်သည်။ #Bali #GilliT #FitFam #Fitspo #Fitness #Gym #Workout
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:54 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 15, 2017 ရက်တွင် (@adamcollard)
rikki နှင့် vikki ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှစ်ချက်
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 1:23 pm တွင် PDT မှာမေလ 23, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 6:20 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 5, 2017 ရက်တွင် (@adamcollard)
သငျသညျ 2018 ခုနှစ်တွင်အဘယ်အရာကိုအောင်မြင်ရန်သွားမည်နည်း ။ ။ ။ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လုံးဝအသစ်၊ သင်၏ခါးပတ်အောက်ရှိအားကစားရုံအချို့သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာသွားခဲ့သော်လည်းသင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုမတွေ့ရပါသလော။ ။ ။ ။ ပြင်ပအထောက်အပံ့များရရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ စီစဉ်, execute, အောင်မြင်ရန်။ ။ ။ ။ ဒီလက်နှစ်ခုလုံးကိုငါချေချင်တယ် ဤနေရာတွင် 2016 & 2017 ကနေငါ့အကောင်းဆုံး။ ရဲ့အလုပ်များကြကုန်အံ့! ။ ။ ။ ။ #instafit #motivation #fit #fitness #gymlife #pushpullgrind #grindout #flex #instafitness #gym #trainhard #eatclean #grow #focus #dedication #strength #ripped #swole #fitnessgear #muscle # shredded #squat # cardio #sweat #lifestyle #pushpullgrind
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 1:21 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 28, 2017 ရက်တွင် (@adamcollard)
ကျွန်ုပ်သိသောအအေးမြဆုံး၊ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ရက်ရောသောကောင်လေးအားမွေးနေ့အထက်ပါ။ အဖေတစ် ဦး ကောင်းရှိပါ
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 3:52 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 31, 2016 ရက်တွင် (@adamcollard)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 6:52 pm တွင် PDT မှာဇွန် 27, 2017 ရက်တွင် (@adamcollard)
Nighttime Micros ???
သင်တစ် ဦး လိင်တံစို့ဘူး
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:26 pm တွင် PDT မှာ 2017 ဇွန် 8, 2017 (@adamcollard)
ပိုက်ဆံ #appylad #flashback ရိုက်
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 6:27 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 26, 2015 တွင် (@adamcollard)
ရေငတ်သောကြာသပတေးနေ့ .. #Iya
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 4:42 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 10, 2016 တွင် (@adamcollard)
လွန်ခဲ့သည့် ၃/၄ ရက်တွင်မနက်ခင်းသည်လုံးလုံးလျားလျားခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကုန်ခန်းသွားခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်၌အဆိုးရွားဆုံးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုတာငါသိဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သုံးပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အပိုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ငါဝေးနေသည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ ငါလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အာဟာရနှင့်တော်တော်လေးခိုင်မာတဲ့အသိပညာရှိသည်နှင့်လူပုံသဏ္getာန်ဘယ်လိုရရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါ carb နဲ့ရေကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်အပြည့်အဝလေ့လာသူပါ။ ဒီတော့ @james_swain ကိုနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်မှာကျွန်တော့် shit ကိုခံပြီးနောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြွေးကြော်ပါ။ ဒါ့အပြင်ငါ 'ငါအားလုံးလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်မရှိ' 'ပုံ? ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါလက်မောင်းရက်များအတွက်အချို့ခြေထောက်ရက်ပေါင်းကုန်သွယ်နှင့်အတူလုပ်နိုင်ထင်ပါတယ် ?? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကျသည်ကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လာမည့်အပတ် မှစတင်၍ လူများကိုအွန်လိုင်းတွင်နည်းပြအဖြစ်ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ #fitness #Fitfam #fitspo #gym #workout #wheels #physique
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:54 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 21, 2016 တွင် (@adamcollard)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 12:04 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 3, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
ဒီ beaut လက်လွတ်ဖို့သွား .. ဒါပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့အရာပေါ်သို့။
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 6:59 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 16, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)
Big ခန္ဓာကိုယ်အထက်စုပ်စက် & ဖမ်း ups
မျှဝေသည် တစ် ဦး က D ကိုတစ် ဦး က M ကို C အို L ကို L ကိုတစ် ဦး က R ကို: D 7:57 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 25, 2018 ရက်တွင် (@adamcollard)